Lu Pour vous : « Comme des sauvages » de Vincent Villeminot - ewa.mg
News - Lu Pour vous : « Comme des sauvages » de Vincent Villeminot
L’article Lu Pour vous : « Comme des sauvages » de Vincent Villeminot est apparu en premier sur Midi Madagasikara.
L’article Lu Pour vous : « Comme des sauvages » de Vincent Villeminot a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fahitana razana :: Fatin-dehilahy tao anaty tatatra
Hatairana ny an’ireo mpandalo tamin’ny fahitana lehilahy iray, manodidina ny efapolo taona, nihohoka tao anaty tatatra, tany Ambalabe Andrefana, Antsohihy, omaly maraina. Tsy nisy aina intsony ilay lehilahy, ka voatery nosintonina vao tafala tao anaty tatatra. Nanao ny fizahana ny razana tany an-toerana ny mpitsabo. Niatrika izany ihany koa ny polisy. Izy ireo rahateo no naka ny razana tao anaty rano maloto sy hanao ny fanadihadiana. Nambaran’ny loharanombaovao fa tsy nahitana ratra na endrika vono ny vatan’ilay lehilahy namoy ny ainy. Tombanana ho nianjera tao anatin’io lakandrano io izy, ka tsy tafarina intsony sady sempotra. Mbola teny aminy ny fitafiany rehetra. Natolotra ny fianakaviana ny vatana mangatsiaka, taorian’ny fizahana sy ny angom-baovao rehetra nataon’ny mpanao fanadihadiana. L’article Fahitana razana :: Fatin-dehilahy tao anaty tatatra est apparu en premier sur AoRaha.
Andavamamba : Olona iray maty voatsatok’antsy
Isan’ny fokontany be mpanendaka iny faritra Andavamamba sy ny manodidina iny, hatreny Antetezana afovoany isan’andro. Araka ny angom-baovao teny an-toerana izao dia mirongo zava-maranitra, sady mamono olona mihitsy ny mpanendaka eny an- toerana. Tsy mifidy ihany koa ny fanaovana ny asa ratsy, fa na andro na alina dia maro ny fitarainana vorain’ny eo anivon’ireo fokontany ireo. Toa ity niseho teny Andavamamba, omaly, izay lehilahy iray no voatsindron’antsy rehefa avy nendahina. Tsy tana intsony ny ain’ity lehilahy iray, handeha hamonjy fodiana sendra nandalo teny an-toerana, vokatry ny tsindron’antsy nataon’ny mpanendaka azy. Olona nandalo maraina ihany koa no nahita ny vata-mangatsiakan’ity farany, izay efa nihosin-drà ny fitafiany noho ny tsindron’antsy nahazo azy teo amin’ny kibony. Raha ny tomban’ny olona moa dia efa ny diva haraina no nitrangan’ny fanendahana azy ity, ary nisy fifanoherana teo aminy sy ireo olon-dratsy, ka izao niafara tamin’ny famonoana nahafaty azy izao, raha ny angom-baovao hatrany. Tsy fantatra araka izany ihany koa ny entana lasan’ireo mpanendaka teny amin’ity olona iray ity. Nilaza kosa fa tsy nisy nahare ny fomba nanaovana izao herisetra izao, ny mponina teny amin’ny manodidina. Ny hany nambaran’ny tompon’andraikitra eny an-toerana dia efa azo lazaina ho faritra mena eny an-toerana rehefa maraimbe sy amin’ny hariva. Efa betsaka mantsy hoy izy ny olona maty voatsindron’antsy noho ny afitsok’ireo mpanendaka, izay matetika lasibatra ny teratany vahiny. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana Eny amin’ny faritra Antetezana Afoavoany voalohany ihany koa dia lasa toerana filalaovan’ny mpanendaka mihitsy, izay efa hatramin’izay ka hatramin’izao. Io no nambaran’ireo olona monina eny an-toerana, mahatsikaritra ny fanendahana miaro herisetra mihatra amin’ireo mpandalo. Ao anaty fitohanan’ny fiara, sy vao maraina ary rehefa hariva mipaika ny amin’ny 5 ora dia efa mafampana eny an-toerana. Tsy latsaky ny dimy izy ireo no miaraka raha ny fanambaran’ny mponina, ary any anaty elakelan-trano maro no isitrihan’ireo andiana tovolahy mirongo zava-maranitra rehefa avy manendaka ny olona sendra azy. Raha ny fitantaran’ny olona hatrany, olona vahiny no tena kendren’izy ireo, izay matetika olona tsy mponina eny an-toerana ireo manendaka eny. Nanamafy izany, ny sefo fokontany antsoina Ramiandrisoa Bernard, izay miadidy ity faritra ity. Ny atidoha amin’ity asa ratsy ity matetika avy eny an-toerana ihany fa kosa mitondra ny namany izy ireo, izay avy any Andranomanalina, Anatihazo, sy Ambodinisotry izy ireo. Efa arahin’izy ireo avy lavitra ireo olona ireo, ary rehefa tafiditra ny elakelan-trano no raikitra ny fanendahana tambabe arahina fampihorohoroana, amin’ny alalan’ny antsy. Mikaikaika ny olona amin’ny zava-misy amin’izao fotoana, ary miantso ny manam-pahefana hijery akaiky ny zava-misy. Misy ihany mantsy hoy izy ireo ny fisafoana ataon’ny polisy avy eo amin’ny boriborintany fahefatra, aorian’ny tatitra alefan’ny fokontany, saingy matetika efa tsy tratra intsony ireo mpanendaka. Mbola tsy nahitana vahaolana kosa hatreto, ity resaka fanendahana isam-pokontany ity raha ny eto an-drenivohitra, na dia manao ny asa fisamborana tsy mitsahatra aza ny polisy. Valérie R. L’article Andavamamba : Olona iray maty voatsatok’antsy est apparu en premier sur .L’article Andavamamba : Olona iray maty voatsatok’antsy a été récupéré chez Triatra.
Volley : Be herim-po sy herin-tsaina Ranaivoson Mamy
Vehivavy mametraka tanjona hatrany ary manana he­rim-po sy herin-tsaina Ranai­vo­son Mamy Harisoa, filoha lefitry ny federasiona malagasy ny volley ball. Hofantarina ny momba azy. Manambady aman-janaka izy, mpilalao volley toa azy, ao amin’ny ASI Volley ball, ny zanany vavitokana. Diakona ao amin’ny FJKM Ambohitantely izy mi­vady ary matoky sy mi­aina amin’ny fitiavan’Andria­manitra izy ireo sady mikarakara ny rantsana fanatanjahantena eo anivon’ny fiangonana. Hita taratra amin’ny asa aman’andraikiny ny fikiri­zany. Mpilalao mendrika tamin’ny “CCCHOI 1989” Eo amin’ity taranja ity, manana ny maha izy azy tokoa Ranaivoson Mamy Harisoa. Maro ny fahatsiarovana tsara ho azy fa tena tsy hadinony ny nahavoafidy azy ho mpilalao mendrika indrindra, tamin’ny CCCHOI (Coupe des clubs champions de l’océan Indien), tamin’ny 1989. Teo ihany koa ny nahazoan’ny ekipam-pirenena malagasy vehivavy ny medaly volamena nandritra ny “Lalaon’ny Nosy”, tamin’ny taona 1990, izay medaly volamena azon’ny ekipa vehivavy malagasy farany, hatreto, ho an’ny “JIOI”. Tao amin’ny klioban’ny AS Star Volley ball ny nilalaovan-dRanaivoson Mamy Harisoa, klioba tompondaka an’Analamanga in-12 sy tompondaka nasionaly in-11 ary nahazo ny amboara intelo nisesy (1992, 1993, 1994) ny CCCHOI. Manana ny diplaoma maha mpanazatra niveau I sy ny « Chevalier de l’ordre de mérite sportif » (2012) izy. Mankafy basikety ihany koa i Mamy Harisoa ary tia mamaky boky sy gazety, mitendry gitara, mitsangantsangana miaraka amin’ny fianakaviany. Sakafo tiany ny nahandro malagasy. Tanjony ho an’ny volley ny hamerina ny lazan’ny volley malagasy maneran-tany mihitsy. Manentana sy mankahery ireo mpanao fanatanjahantena Ranaivoson Mamy Harisoa hikendry hatrany ny dingana avo sy tsara indrindra.Mi.RazL’article Volley : Be herim-po sy herin-tsaina Ranaivoson Mamy a été récupéré chez Newsmada.
Herintaona nivarotana héroïne sy cocaïne teny 67ha: nizerianina roa lahy sy vehivavy malagasy iray tratran’ny polisy
Natolotra ny fampanoavana, omaly, ireo teratany nizerianina roa lahy voarohirohy tamina raharaha fivarotana héroïne sy cocaïne eny 67 ha sy ny manodidina. Efa ho herintaona ny nanaovan’izy ireo ity asa ity…Voasambotry ny polisy misahana ny ady amin’ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina (Stup) Anosy, teny Itaosy, afakomaly hariva tamin’ny 4 ora, noho ny fitazonana sy ny fivarotana zava-mahadomelina mahery vaika ny teratany afrikanina roa lahy (nizerianina) sy vehivavy malagasy iray. Raha ny fampitam-baovao nampitain’ny eo anivon’ny Polisim-pirenena, loharanom-baovao avy amina mpanome loharanom-baovao, ny nahafantarana fa misy teratany afrikanina mivarotra zava-mahadomelina eny Itaosy. Rehefa naharay izany ny polisin’ny Stup, nidina avy hatrany teny an-toerana ka tratra tao an-trano fonenany ireto teratany nizerianina ireto niaraka amin’ny vehivavy malagasy iray mpiray tsikombakomba amin’izy ireo. Niroso tamin’ny fisavana ny tranony ireo polisy ka hita tao ny fonosana heroïne 75 grama, cocaïne 2 grama ary amphetamine 0,5grama miaraka amin’ny fitaovana fandanjana miisa roa sy poti-drongony. Nentina teny amin’ny sampandraharaha misahana ny ady amin’ny fifohana sy ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina izy ireo mba hanaovana fanadihadiana.20 000Ar ny grama-n’ny cocaïne… Taorian’ny fanadihadiana natao azy ireo no nahafantarana fa mpamatsy zava-mahadomelina mahery vaika ireo mpifoka sy mpitsindrona izany eny 67 ha izy ireo ka amidin’izy ireo 20 000Ar ny grama-n’ny cocaïne raha 50 000Ar kosa ny grama-n’ny amphetamine. Nohamafisin’ ny polisy fa nandritra ny herintaona eo ho eo ny efa nanavaon’izy ireo ity asa fivarotana zava-mahadomelina ity, saingy izao kosa izy ireo vao tratra. Niaiky ny heloka vitany izy ireo nandritra ny famotoran’ny polisy. Tsy vao izao ny nahitana teratany afrikanina mpanao tra­fikana zava-mahadomelina mahery vaika toy itony tratra teto Madagasikara. Eny amin’iny faritra 67 ha iny no toerana ifamezivezen’izy ireo manao ny fivarotana izany. Fantatra nandritra ny fanadihadiana natao fa lalan’ireo mpanao trafikana héroïne sy cocaïne i Madagasikara ary isan’ireo lohalaharana amin’izany trafika izany ny teratany afrikanina. Aiza ny fanaraha-maso ireny teratany afrikanina mi­famezivezy eto amintsika ireny? Isan’ireo malaza amin’ny fi­tondrana zava-mahadomelina mahery vaika toy izao ny teratany malagasy miala eto Ma­dagasikara ka any Maorisy vao tratra.Jean ClaudeL’article Herintaona nivarotana héroïne sy cocaïne teny 67ha: nizerianina roa lahy sy vehivavy malagasy iray tratran’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Firenena sinoa: tonga hiara-hiasa amin’ ny Komity olympika malagasy ny MJS
Nigadona, omaly teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ireo delegasiona miisa valo avy amin’ny minisitera sinoan an’ny fanatanjahantena, notarihin’andriamatoa Wang Ping, filohan’ny delegasiona. Nitsena azy ireo Rakotozafy Rosa sy ny maitre Gao.Handinika izay hampandrosoana ny fanatanjahantena malagasy ireto delegasiona ireto raha ny fanazavan’ny maitre Ramaherison José, fantatra amin’ny anarana hoe “Mtre Gao”, filohan’ny federasiona malagasy ny kung fu wushu. Hihaona mivantana amin’andriamatoa minisitra izy ireo ho amin’ny anio, hanapaka izay azo hiaraha-miasa mandritra ny efatra andro hijanonany eto Madagasikara. Hifampiresaka amin’ny Komity olympika malagasy ihany koa ireto delegasiona sinoa ireto, raha ny fanazavana hatrany. Marihina fa avy eo anivon’ny minisitera sy ny orinasam-panjakana sinoa, ahitana ihany koa ny avy eo anivon’ny China Sport ireto delegasiona manan-kaja ireto. Ny orinasa “China Sport” izay nanampy betsaka an’i Madagasikara tamin’ny fandefasana ireo atleta niofana tany Sina, ny taon-dasa. Voninahitra lehibe ho an’i Madagasikara sy ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena izao fahatongavan’ireto iraka manokana sinoa ireto, raha ny nambaran-dramatoa tale Jeneralin’ny fanatanjahantena, Rakotozafy Rosa, omaly, teny Ivato. Nisaotra ihany koa an-dRamaherison José ity farany satria anisan’ny angady nananana izao fiaraha-miasa izao ity filohan’ny federasiona ny kung fu wushu ity.Azo antenaina ny hisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena sinoa sy ny malagasy ary irariana ny fitohizan’izany amin’ny ho avy, raha ny nambaran’ny filohan’ny delegasiona Sinoa, i Wang Ping (Deputy Director). Mi.RazL’article Firenena sinoa: tonga hiara-hiasa amin’ ny Komity olympika malagasy ny MJS a été récupéré chez Newsmada.